Xtensio: Mamorona, mitantana ary asehoy ny fiantoham-bolanao | Martech Zone
Talata, Aprily 28, 2020 Talata, Aprily 28, 2020 Douglas Karr
Xtensio dia paikady marika sy foibe fifandraisan-davitra izay ametrahan'ny fikambanana sy fandrindrana ny ezaka ara-barotra manerana ny ekipa anatiny, ny mpanjifa ary ny mpiara-miombon'antoka. Manamboara sy mizara izay antoka ilainao amin'ny mpamoaka lahatsoratra. Mifanaraka ny tolotra azonao rehefa mivoatra ny tetikasanao. Na mandrindra fanombohana fampielezan-kevitra lehibe ianao, manatsara ny fifandraisanao anaty, na mamorona tatitra sy fandinihana tranga, Xtensio no ivoahan'ny asan'ny ekipanao.
Mamorona antoka ara-barotra amin'ny marika tsy misy mpamorona
miaraka Xtensio, ny ekipanao dia afaka manangana na inona na inona avy amin'ny personas stratejika, tolo-kevitra, drafitra fampiroboroboana ary pejy fananganana miaraka amin'ny fanamorana fanamboarana tranonkala. Avy eo avereno ampiasaina haingana sy haingana, havaozy ary alaivo manokana ny atiny ho an'ny fampielezan-kevitra samihafa. Ny tombontsoa dia misy:
Mitsitsia fotoana amin'ny famolavolana - Tonga mpamorona daholo ny ekipa. Tariho sy alatsaho ireo maodelim-pifandraisana - sary, horonan-tsary, kisary, tabilao. Ovao ny loko, ny fiaviana na ny habeny. Amboary ny layout raha ilaina izany.
Fanaterana marika tsy misy ilana azy - Farito ny tarehin-tarehin'ny ekipanao amin'ny endritsoratra sy paleta fandokoana ataon'ny orinasan'ny ekipanao mba hididiana ny marika manerana ny ekipa. Ataovy miavaka ny rohy zaraina ary asio teny miafina mba hitazomana ny antoka sy antoka azo antoka an'ny fikambanana.
Tsory ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa - Miaraha miasa amin'ny ekipa manerana ny departemanta sy ny fitantanana. Ny fanovana rehetra dia voatahiry sy ampifanarahana amin'ny solo-saina rehetra. Vaovao foana ny olon-drehetra ary tsy misy korontana ny boaty fampidirana anao.
Nila nanana a toerana hiara-hiasa, ary mitaky ny hanaterantsika vaovao amin'ny hafa ihany koa. Taloha dia nampiasainay ny Asana hiara-miasa, ary ny PowerPoint mba hatolotra ireo mpiara-miombon'antoka hafa. Xtensio dia manolo ny filàn'izy roa mamirapiratra. Afaka miara-miasa izahay, mizara eo noho eo nefa tsy mandefa firaketana izay tsy maintsy tahirizinao avy eo ireo kinova samihafa miaraka amin'ny anarana miavaka - fantatrareo daholo izany fandavahana izany - ary avy eo mampiasa fitaovana mitovy amin'izany hanolorana azy.
David Nason, CEO / mpanorina ny HireBrain
Asehoy, zarao, ary ampidino ny antoka
Mba hanamorana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanapa-kevitra na mpanjifa ivelany, Xtensio dia manome ny fahaizana:
Mizarà rohy web mivantana - Mandefasa antoka ilaina ho rohin-tranonkala azo ovaina. Manampia fiarovana tenimiafina. Tsy mandefa firaketana sy kinova maromaro intsony isaky ny fanavaozana ny antontan-taratasy iray.
Mampisehoa sary mihetsika nomerika - Amin'ny tsindry iray dia mivadika ho sary mihetsika nomerika ny folio anao. Manolora sehatra mahaliana sy mifampiresaka na aiza na aiza. Ny fizarana tsirairay amin'ny folio dia manjary mihetsika.
Misintona rakitra PDF na PNG - Na manao ahoana na manao ahoana fanandramanao hifindra tanteraka amin'ny dizitaly, ny antoka sasany dia mila tahiry ho kopia sarotra. Alefaso toy ny fisie PDF na PNG ny rakitrao manontolo na ny singa tsirairay
Midira ao amin'ny Xtensio
Manorata sehatra fiasana manokana ho an'ny masoivohonao sy ny mpanjifanao
Xtensio ho an'ny orinasa manolotra sehatr'asa tsy miankina sy misy marika amin'ny fampifandraisana ny ekipanao amin'ny fampandrosoana, ny vokatra, ny varotra ary ny fitantanana amin'ny vaovao ilain'izy ireo.
Mora ampanjifaina azo zaraina - Manokana ny antoka ara-barotra ho an'ny mpihaino sy ny toeram-pivarotana samihafa dia tsotra. Tehirizo ny folio ho modely natokana ho an'ny ekipanao mba hampiasa indray mandeha hatrany. Azonao atao aza ny mamoaka azy amin'ny tranokalanao hananganana ny marikao.
Ataovy mifanaraka foana ny rehetra - Arindrao ny tetikasanao sy ny antontan-taratasinao amin'ny alàlan'ny fantsona - fampielezan-kevitra, sampana, mpanjifa, tatitra, sns. Manampia mpiara-miasa na zarao ny rohy fantsona hahafahan'ny tsirairay manana ny fidirana ilainy, rehefa ilainy izany.
Ataovy vaovao hatrany - Araraoty ny fizotran'ny ekipanao amin'ny alàlan'ny fampandrenesana ao amin'ny app ary araho ny fidiranao amin'ireo statistikan'ny folio. Azonao atao ny manitsy ny fizotranao hahomby sy mamantatra ireo fotoana fitomboana vaovao.
Misorata anarana amin'ny Xtensio ho an'ny orinasa
Tranon-tsarimihetsika Xtensio Template
Azonao atao ny manomboka amin'ny takelaka foana na azonao ampiasaina ny môdely sy ny loharano Xtensio ho an'ny dingana samihafa amin'ny fampiharana ny paikadim-pitomboanao - manomboka amin'ny famoahana ny mpanjifanao tsara sy ny tsenan'ny vokatra ka hatramin'ny fananganana tolo-kevitra sy paikady na fanazaran-tetika anatiny, tatitra momba ny varotra ary orinasa hafa antoka.
Fambara: Izahay dia Mpikambana Xtensio.
Tags: manangana antoka amin'ny Internetfitantanana antokamodely mamoronaworkflow mamoronahirebrainfamerenana famoronana an-tseraserampamorona pdf an-tseraserafampisehoana an-tseraserampandrafitra tolo-kevitra an-tseraseraxtensio
Inona ny famolavolana mamaly? (Lahatsary fanazavana sy sary)